Mpempe akwụkwọ Canvas | ROYI ART gallery
Site na nkwa nke afọ ojuju nke 100% na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ị nwere ike iji ntụkwasị obi zụta ike ndị dị ọnụ ala Canvas Prints na arịa dị ọnụ ala.
Mbipụta anyị na-ebipụta kwaaji ya na teknụzụ mbipụta ọhụrụ dijitalụ na-adị nchebe gburugburu na enweghị isi. Ogologo akwukwo nke inks anyi ji eme ihe na-eweta mgbanwe di egwu ma dikwa egwu na akwa na-adigide na akwa na-adigide nke na-esikwa ike.
Ndi okacha amara mara ga adọ gi aka na nti ndi n’enwe oria laser ma duzie gi ka ị nweta ngwaahịa inkjet. Dịka iwu izugbe mkpịsị aka ukwu, Epson, HP, na Roland bụ ndị na-asọ mpi. Agbanyeghị, n'etiti ụdị ndị a na igwe ha, enwere ọdịiche.
Mbipụta niile kwaaji na-agbatị ma dị njikere ịdabere na ya site na iji nke ọma, yana osisi na-echekwa gburugburu ebe obibi na ihe ndị mejupụtara osisi dị ihe dị ka sentimita atọ (3.5 cm).
Ọ bụrụ na ọ na-eji ihe ndị e ji esiji mmiri eme, enwere ezigbo ohere na onyoonyo gị ga-enweta ụfọdụ mgbanwe ị na-agaghị enwe ekele. Maka ihe osise gị, ọ na-akwụ ụgwọ itinye ego na dyes mara mma nke nwere mmiri mmiri. Ọtụtụ n'ime ngwaahịa ndị a anaghị ekpughepụ ihu UV, nke dị mkpa mgbe ịchọrọ ọrụ nka ka ọ gafee tupu afọ iri ma ọ bụ narị afọ gara aga.
Jiri Royi Art were atụgharị foto gị.
Foto anyị na kwaaji dị mma maka ịchọ ụlọ ma ọ bụ ọfịs gị mma, ma zuo oke dị ka onyinye foto.
Kpọtụrụ anyị taa na a ga-ekenye gị otu ọkachamara na akaụntụ gị yana ịkpọtụrụ gị n'oge na-adịghị anya.
Jikerela inyere gị aka n’ajụjụ ọ bụla.
Abstract Oil osise , Contemporary Oil sere , Mpekere Mpekere Na Kanvas , ndina Ogwe , Aka Oil osise , Oil sere , Ngwaahịa niile.